wadaniHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Author Archives: wadani
Muqdisho : HN :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qaraxyadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, Qaraxa koobaad ayaa ka dhacay Agagaarka Taalada Dhagaxtuur oo ku dhow Madaxtooyada Soomaaliya, halka kan kalena uu ka dhacay Afaafka hore ee Hotel Dorbin. Rasaas badna oo bilaabay salaadii maqrib kadib ayaa Ciidamada Dowladda iyo rag ka tirsan Shabaab oo weerarka soo qaaday...
Muqdisho : HN :- Waxaa goor dhaw meel ku dhow xarunta Nabadsugidda Qaranka ee Qarax xoog leh oo dhacay meel ku dhow xarunta Nabadsugida magaalada Muqdisho Qaraxan ayaa xigey rasaas xoog leh iyadoo weli ay socdaan rasaasta, lama oga qasaaraha ka dhashay qaraxan hase yeeshee dhowaaqa qaraxa ayaa laga maqlay meelo ka fog-fog goobta uu ka dhacay Muqdisho. Dhinaca kale waxaa...
Muqdisho : HN :-Wasiirka Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha xukumada Fedaraalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka digey in dowlad mucaarad ku ah Somaliland Muqdisho laga dhiso waxana uu ku taliyay in lala galo Somaliland wadahadalo isfaham iyo wax wadaqeybsi ku salaysan. Maxamed Cabdi Maareeye Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa sheegay in isagu uu yahay...
Madaxweyne Farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay ra’iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga
Muqdisho : HN :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay, Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Turkiga Mudane Hakan Çavuşoğlu iyo wafdi uu hoggaaminayey. Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyey dowladda Turkiga taageerada ay mar walba la garab taagantahay Soomaaliya, waxa uuna ammaanay xiriirka walaaltinnimada leh ee kala dhexeeya Turkiga. Ra’iisul...
Xubno ka tirsan Al-shabaab oo mar kale duqeyn lagu dilay
Jubbada Hoose : HN :-Ugu yaraan Saddex xubnood oo ka tirsanaa kooxda nabad diidka Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar xagga cirkaa ah oo xalay ka dhacay Tuulada Bangeeni oo 8 KM dhanka galbeed kaga beegan Degmada Jamaame ee Gobbolka Jubbada hoose. Duqeyntan oo ay geysteen Diyaaradaha dagaalka Maraykanka ayaa lala beegsaday Mooto Bajaaj ay saarnaayeen Shan Xubnood oo ka tirsan...
Duqa Muqdisho oo la kulmay culimada Soomaaliyeed
Muqdisho : HN :-Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo kulan wadatashi ah la qaatay culumada ayaa ugu baaqay in ay dardargeliyaan kaalinta ay ku leeyihiin nabadeynta iyo hirgelnta caddaaladda. Guddoomiyaha ayaa sheegay in Culumada Soomaaliyeed ay asaas u yihiin di- u-hagaajinta hannaanka caddaaladda iyo garsoorka,...
Golaha Wasiirada oo ka digay gaadiid qarxyada sida oo ku jira magaalada Muqdisho
Muqdisho : HN :-Golaha Wasiirada oo maanta Muqdisho ku yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa waxa ay diirada ku saareen arimaha amniga, iyada oo sidoo kale kulanka warbixino looga dhageystay Wasiirada qaar ee Xukuumadda. Wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaalle) ayaa Golaha siiyay warbixin la xiriirta xaalada amni ee dalka gaar ahaan...
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Turkiga oo Muqdisho
Muqdisho : HN :-Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga Hakan Cavusoglu iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya. Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Wafdiga Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga ayaa booqan doona Safaaradda...
48 sano guuradii ka soo wareegtay Aas-aaska ciidamada Asluubta oo la xusay
Muqdisho : HN :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qayb galay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo loogu dabaal dagayay xuska sannad guuradii 48-aad ee ka soo wareegtay maalintii la aas-aasay Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed. Ra’iisul Wasaare Kayre ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan Ciidanka Asluubta...
Madaxweynaha Hirshabeelle oo la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle
Djabuuti : HN : -Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo booqasho ku joogga dalka Jabuuti ayaa la kulmay Madaxweynaha dowladda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Waxa ay ka wadahadleen dadaallada ciidamada Jabuuti ay ka waddaan gobolka Hiiraan. Madaxweyne Waare oo ay wehliyeen xubno ka tirsan maamulkiisa, Saraakiisha Ciidamada Jabuuti ee ku sugan...
Trump oo sheegay in macalimiinta oo la hubeyn doono
Washington : HN :-Donald Trump Madaxwaynaha dalka Mareykanka ayaa soo jeediyay in macallimmiinta oo la hubeeyo ay mustaqbalka ka hortagi karto toogashiinka ka dhacda iskuulada Mareykanka. Madaxwayanaha ayaa sheegay in iskuulada oo hubka loo dheereeyo ay uun dhiiri galinayso in ay weeraro dheeraad ah ay dhacaan. Madaxwaynaha Mareykanka ayaa xusay in maclimiinta oo qaata...
Itoobiya oo sii deysay maxaabiis ONLF
Jigjiga : HN :-Mas’uuliyiinta Maamulka Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xabsiga ka sii daayay ku dhawaad 1,500 Qof oo ka tirsan Jabhadda Mucaaradka ah ee ONLF ee ka dagaallanka dhulka Soomaalida Itoobiya. Siideynta Maxaabiistaan ayaa lagu soo beegmay xilli wadahadal qaatay maalmo badan ay yeesheen ONLF iyo sidoo kale dowladda Itoobiya. Dadkaan faraha badan...
Dowladda ka jawaabtay eedeyn uga timid hay’adda HRW
Muqdisho : HN :-Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan waxba ka jirin warbixin 80 bog koobneyd oo ay soo saartay Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch. HRW ayaa warbixin ay soo saartay maanta waxa ay ku sheegtay in Dowladda Federaalka ay Maxkamad Millitari soo saarto caruurta yar ee aan qaan gaarin, kuwaasi oo loo geysto tacadiyo kala duwan. Waxay...
Kenya oo sheegtay in qabtay rag dhawaan Macaliimiin ku dilay Gobalka Waqooyi Bari
Wajeer : HN :-Rag looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-shabaabka ka dagaalama kenya ayaa la xiray kuwaa oo lagu tuhmayo in ey soo maleegeen weerar Dabayaaqadii Asbuucii hore lagu dilay 3 Macalin oo kenyaan ah iyo mid kamid ah macalintaa la dilay xaaskiisii kana soo jeeday deegaanada kale ee dalka Kenya. Madaxa Amaanka Gobolka waqooyi bari kenya Mohamud Salah...
Canshuurta lagu soo rogay ganacsatada oo shari darro lagu tilmaamay
Muqdisho : HN :-Guddiyada Maaliyadda iyo Ganacsiga ee Golaha shacabka Baarlamaanka Federaalka ayaa sharci darro ku tilmaamtay canshuurta cusub ee ay soo rogtay Wasaaradda Maaliyadda, taasoo dhalisay khilaaf keenay inuu hakado ganacsigii Suuqa Bakaaraha iyo dhaq dhaqaaqii Dekeda Muqdisho. Kulan Guddiyada Joogtada Golaha shacabka ay yeesheen ayaa waxaa uu u xil saaray Guddiyada...
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo magacaabay madaxa Isku xirka Deeqaha
Muqdisho : HN :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magacaabay Madaxa Unuga Isku xirka Deeqaha dalka, kaasoo loo magacaabay Muhumed Xuseen Axmed oo ah nin aqoonyahan ah. Axmed Ceynte oo xilkan hayay ayaa laga qaaday, kaasoo ay horay u magacawday dowladdii hore ee Xasan Sheekh hoggaaminayay, waxaa uu intii uu hayay xilka Unuga Isku xirka Deeqaha waxaa...
QM oo gargaar caafimaad ugu deeqday Soomaaliya
Muqdisho : HN : -Hay’adda Socdaalka ee Qaramada Midoobay ee IOM oo kaashaneysa Hay’adaha cunnada ayaa sahay caafimaad oo gaareysa Sideed Tan waxa ay ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed. Waxa ay sheegtay Hay’adda gargaarkan bixisay in loogu tala galay dadka ku nool Somaliland, Puntland, Jubbada Hoose, Gedo iyo gobolka Banaadir. Sahayda ayaa isla markiiba loo diri doonaa...
Al-shabaab oo sheegay in ay weerar ku qaadeen ciidamo Mareykanka ah
Muqdisho : HN :-Ururka Al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen in ay weerar dhabagal ah u dhigeen Kolanyo Ciidan oo isugu jira Ciidanka Mareykanka iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka degmada Afgooye. Ciidanka Mareykanka iyo kuwa AMISOM oo ay wehlinayeen Ciidamo Soomaali ah ayaa waxa ay ka soo baxeen degmada Afgooye, wuxuuna weerarka ku qabsaday...
Mareykanka oo beeniyay in Al shabaab Askari ka tirsan ciidamada ay ku dileen Soomaaliya
Muqdisho : HN :-Wasaarada arimaha dibada dalka Mareykanka ayaa war ka soo baxay ku beenisay Askari Mareykan ah oo shalay Al-shabaab ay sheegeen in ay ku dileen dagaal ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland. Al-shabaab ayaa shalay waxa ay baahiyeen in dagaal ay la galeen ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidamada AMISOM,...
Al-shabaab oo weeraray Qoryooley
Qoryooley : HN :-Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya degmada Qoryooley xoogaga ururka Al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidanka dowladda Federaalka ay ku leeyihiin duleedka degmadaasi. Dagaalkan u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo Al-shabaab ayaa waxa uu socday ku dhowaad muddo hal saac ah, kaasi oo labada dhiac ay isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa...